११ बर्षीय भाइरल कमला ब्युटीपार्लर पुग्दा घेरे उनको फ्यानहरुले!कहाबाट आयो यति धेरै पैसा कमललाई! – Khabar Silo
कमला घिमिरे फेरी काठमान्डौ आएकी छिन्।फेसियल हाउसमा सुन्दरी बन्न पुगेकी कमललाई उनको फ्यानहरुले घेरेको छ।कमला घिमिरेले गाएको दोहोरीले चेर्चा पाएको केहि समय बित्न नपाउदै उनका लाखौ फ्यानहरुले कमलाको खोजि गरिरहेका छन।सोहि घेरामा कमला परेकी छिन।
कमला घिमिरेको ११ बर्षीय उमेरको कलाको प्रशंसा गर्नेहरु चर्चित कलाकारहरु पनि पर्छन।उनि राम्रो गाउन सक्ने र एउटा अदभुत क्षेमता प्रस्तुत गर्न सक्ने भगवानले दिएको एक बरदान भन्दै कमललाई सुभकामानाको ओहिरो आउन थालेको छ।कमला कस्तो मान्छे हुन त् हेरौ यो भिडियो राम्री बन्द कमला कस्तो देखियो !
रेखाको बिहेको कार्ड !
यो वर्ष केही नेपाली अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुले घरजम बसाएका छन् । गएको मंसिरमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा र यही फागुनमा अभिनेत्री रिश्मा गुरुङले लगनगाँठो कसे । यस्तै, शुक्रवार नेपाली फिल्मका लभ बर्डस् प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी विवाह बन्धनमा बाँधिए । अब, दुलही हुने पालो अभिनेत्री आँचल शर्माको आएको छ । उनी यही फागुनमा विवाह […]
बिहे अघि नै दुई ‘छोरी’ थिए रबीना टन्डनका
बलिउडमा एक युग थियो, रवीना टन्डनको। अनिल कपुर, अक्षय कुमार अनि सुनिल सेट्टीसँगको जोडी एकताका खुब हिट थियो हिन्दी सिने जगतमा।बलिउडमा रवीनाको उपस्थिति अहिले अलि कम भएको छ। यद्यपि टेलिभीजन कार्यक्रम अनि विज्ञापनहरुमा रवीनालाई अझैं पनि देख्न सकिन्छ। आज उनको जन्मदिन हो। १९७४ अक्टोबर २६मा उनी जन्मिएकी हुन्। उनलाई घरमा ‘मुनमुन’ भनेर बोलाउँछन्। यो नाम […]
दशैं बिदामा घुम्ने योजना बनाउनुभएको छ? घुमघामको चुस्त आर्थिक ब्यवस्थापन यसरी गर्नुस्
बिदाका दिन पनि पशुपतिको भेटी बैंकमा जम्मा गरिने